Tombontsoa amin'ny fakantsary vatana amin'ny Indostria | Vahaolana OMG
Nanomboka tamin'ny departemantan'ny polisy ny fakantsary raikitra mihetsika, misy ny fanamarinana ny fitarainana be dia be avy amin'ny olom-pirenena. Ilaina tokoa ny governemanta raha tokony hahalala hoe iza ireo manamboninahitra. Ireo dia nitondra ny fakantsary fitafiam-batana ho amin'ny fisian'izy ireo, fitaovana fakantsary fotsiny raikitra eo amin'ny vatan'ny olona afaka zahana mahita ny zavatra ataon'ny olona iray. Natao indrindra ho an'ny polisy io indrindra raha eo am-piasana, mametraka ny fandaharana dia tena manampy amin'ny fanampiana ny fampihenana ny fitarainana miditra amin'ny tsy tokony hampiasa hery sy fitondran-tena tsy manara-penitra eo amin'ny polisy. Nandritra ny taona maro izay dia nanomboka ny famolavolana ny fakantsary vatana ho an'ny fandaharan'asan'izy ireo ny indostria hafa. Inoana fa tahaka ny nanampy be ny departemanta eo amin'ny polisy io dia afaka manampy azy ireo amin'ny fomba lehibe ihany koa rehefa mandroso amin'ny hetsika ara-indostria manaraka izahay. Ny orinasa sasany izay ampiasainy dia:
Serivisy, entona ary serivisy fahadiovana
Fitantanam-bola, fiantohana ary trano fonenana
Agriculture: Mivoatra be ny sehatry ny fambolena ary mampifanaraka ny fitaovana sy ny milina isan-karazany. Nandritra ny toeram-piompiana, ny mpiasa manao ny fakantsary vatana dia afaka mirakitra an-tsoratra ny asa andavanandro ary manome maso fanampiny izay hanaporofo ny asa izay lazainy fa ataon'izy ireo. Mety ampiasain'ny mpiasa izay mitaiza omby, mpiasa manangona atody ary na ho an'ny fijinjana boky aza tsy misy ny fampiasana traktera. Ny fananana ny fakantsary vatana dia azo antoka fa hanara-maso betsaka ny asa fiompiana. Izy io koa dia mety hanamarina ny fanamarinana, amin'ny toe-javatra tsy ampy na ny vokatra dia tsy dia kely loatra amin'ny zavatra antenaina. Na dia mampiseho am-bavany ny biby amidy aza ny mpiasa iray, dia tsara ny manana fakantsary vita amin'ny vatan'ora izay ahafahana manara-maso ny fisehon'ilay biby hita maso mba hahitana ny endriny na hanoro hevitra ny biby fiompy voafantina. Ho an'ireo mpiasa mitondra ny traktera, manana fakan-tsary amin'ny vatana dia afaka manampy amin'ny fahalalany ny habetsaky ny sain-dry zareo sy ny fahombiazan'ny asany. Na dia ampifangaroana aza izany rehetra izany dia zava-dehibe ny misy efitrano fandraisana mpizara izay ahitàna izany rehetra izany na azo jerena amin'ny fotoana tena izy. Azo tehirizina ihany koa izany ho porofom-pahamarinana isaky ny misy ilana famerana sazy na misy gony mpiasa iray aza. Ny fananana ny filaminana eo amin'ny toeram-piompiana dia ampiasain'ireo fakantsary vatana dia mety hampitombo ny fiarovana ao amin'ny toeram-piompiana, ahafahana mamantatra ny rehetra miditra sy mivoaka ny vavahady. Ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia mety hitondra ny orinasam-pambolena ho amin'ny dingana manaraka.
harena ankibon'ny tany: Ny fampitaovana mpiasa amin'ny sehatry ny harena ankibon'ny tany dia mamela azy ireo amin'ny ambaratonga hafa, mahatonga ny fanaparitahana ny fifandraisana sy ny torolàlana kokoa. Mahatonga ny fitantanana tetik'asa lavitra ho azo atao arak'izay lavitra be ianao, fa mbola mandrindra ny mpiasao manome azy ireo manokana momba ny torolàlana momba ny tokony hatao sy ny tokony hanaovana izany. Na dia ampiharina aza ny rafitra fakantsary vatana dia misy ny fihenan'ny vidin'ny fitaterana satria tsy mila mandeha midina foana ianao noho ny fanaraha-maso sy ny tatitra, dia ho hitanao ny atao rehefa vita. Miaraka amin'ny fakantsary ampiasaina rehefa vita ny asa dia misy fitomboana lehibe amin'ny fahombiazan'ny mpiasa, mahalala tsara fa voarafitra avokoa izy rehetra ary arahi-maso akaiky ny asan'ny asany, ny tsirairay dia ho liana amin'ny fanomezana izay tsara indrindra ho an'ny asany. Nihatsara ny tena-potoana raha toa ka ampitandremana ny loza ateraky ny miasa ireo mpiasa, dia mora raisina ihany koa izy ireo satria azo anaovana haingana ny fitsaboana. Miaraka amin'ny endrika horonantsary mivantana ary misy audio 2 izay ahafahan'ny mpijery sy ny mpiasa mifampiresaka, dia zava-dehibe ny fifampiresahana ary mety hamonjy ny adin-tsaina maro hisorohana ny fahavoazana mety ho natao. Sarimihetsika an'arivony ny horonantsary iray, miaraka amin'ireo fakantsary avy amin'ny fakantsary vatana afaka miaro azy:
Adihevitra momba ny asa
Fifandirana amin'ny fanaterana fitaovana
Fikomiana atao amin'ny ady
Construction: amin'ny fananana ireo mpiasa amin'ny fanampiana an-tsokosoko amin'ny fomba rehetra, azonao atao ny manao azy ireo hanao asa fanamboarana ara-dalàna raha ny fanaraha-maso ny tontolo iainana sy ny loza aterany dia avela ho an'ny ekipa mpanara-maso. Raha sendra lozam-pifamoivoizana be dia be, dia azo ampiasaina hanesorana ny zavatra. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fisavana raha manaraka ny fitsipika sy fitsipika momba ny fiarovana izy ireo na koa mihaino izy ireo rehefa nitranga ny loza. Rehefa mametraka ny fakan-tsarimihetsika ny mpiasa dia afaka manampy ny fandriam-pahalemana ny faritra, mahatonga ny fifandraisana eo anelan'ny ekipan'ny fiarovana sy ny mpiasan'ny tranokala fananganana haingana izy io. Ary koa, ireo mpiasan'ny fiarovana eo amin'ny toeram-pananganana dia hahita ny maha-fitaovana ny fakan-tsary amin'ny maha-izy azy, satria azon'izy ireo atao ny mitatitra mivantana izay miditra ao amin'ilay tranokala ary hijery raha manana fahazoan-dàlana hanao izany izy ireo. Ity no fomba iray azo antoka hanatsarana ny fiarovana ny tranokala. Raha sendra lozam-pifamoivoizana lehibe dia azo ampiasaina ny fakantsary avy amin'ny fakantsary bodybuilding mba hanadihady momba izay tsy maintsy nitranga, ny milalao horonantsary dia afaka manazava fotsiny amin'ny fikambanana iray ny nahatonga ny loza. Miaraka amin'ny fakan-tsary mahery vaika, ny sary manara-penitra avo lenta dia azo esorina amin'ireo toerana tena voafaritra ao anaty endrika iray ary ampiasaina ho fanamarinana na fanazavana.
Manufacturing: raha tena zava-dehibe tokoa ny amin'ny indostrian'ny famokarana ny vokatra rehetra / tsara vita dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra nomena. Misy ny lesoka manodidina, lasa tena ilaina tokoa ny vokatra rehefa mpivady miaraka no hita sy arahi-maso. Ilaina ihany koa fa ho an'ny indostria izay mitaky fanangonana singa, dia mivory tsara daholo izy rehetra ary manaraka ny fenitra rehetra. Ny fananana ny fakantsary mitafy vatana dia ahafahana mandinika sy manamarina fa isaky ny vokatra vita dia mifanaraka amin'ny fenitry ny famokarana orinasa izy ireo ary ny lesoka dia tapaka ambany farafaharatsiny. Zava-dehibe ihany koa ny fakan-tsary satria raha sendra lozam-pifamoivoizana izay nitrangan'ny tranga sasany ary handray andraikitra ny mpitantana, dia azo alefa ny horonantsary horonantsary avy amin'ilay tranga ary ampiasaina hanadiovana zavatra. Ny fahitana horonan-tsary mifanandrify amin'ny fijoroana ho vavolon'ny mpiasa dia mitaky haingana amin'ny fandraisana andraikitra sy fandaminana. Ny fakan-tsary fakan-tsary dia ahafahan'ny mpiasa misahana ny fanaraha-maso mahita ny ataon'ilay mpiasa tsirairay. Amin'ny fanaraha-maso akaiky an'ity fomba ity, dia lasa mora kokoa aza ny fanaovana tombana ireo mpiasa handroahana ireo kamo sy tsy salama ary mampiroborobo sy mampitombo ny karaman'ireo matotra. Raha vantany vao fantatry ny mpiasa fa voahaja izy ireo, dia miteraka fahatsiarovan-tena ao amin'izy ireo izany izay manosika azy ireo hanao tsara kokoa hatrany ary hatokana ho amin'ny asa. Mampihena ny fihemorana izany ary mamporisika ny hiasa mafy mba hiantohana ny fahamboniana.
Fitaterana: Ny indostrian'ny fitaterana dia fantatra fa nampiasa fakantsary hanaraha-maso ny mpamily indraindray, mampiasa GPS ihany koa izy ireo hanara-maso ny hetsika entana sy ny toerana misy ny mpamily izay mampiasa ny serivisiny ho an'ny familiana ara-barotra. Ny fakan-tsary miakanjoana dia mety ho ampiasain'ny mpamily kamiao, fiarakaretsaka ary eny an-tsena an'habakabaka aza ary mpiambina ny ranomasina. Ny fananana ireo fakan-tsary amin'ny mpamily indrindra dia tena mahomby, azo arahi-maso hahafantatra raha mankatò ny lalànan'ny fifamoivoizana izy ireo ary manaraka ny fitsipika sy ny fitsipika. Manamora ny fanamarihana ireo mpamily fa tsy aotiny. Maro ny mpamily kamiao no misotro rehefa mitondra fiara, miafara amin'ny fimamoany amin'ny farany ka niteraka lozam-pifamoivoizana nanapotika ny orinasany miasa. Ny mpiasan'ny rivotra amin'ny fiaramanidina dia azo atao ny manao fakan-tsary mifono vatana hahafantatra sy hanamarina ireo sidina amin'ny sidina an'habakabaka manokana. Miaraka amin'ny rindrambaiko fankatoavana tarehy dia mora ny manara-maso ireo mpanao heloka bevava mety miditra ao anaty aotobisy na fiaramanidina. Azonao atao ny mandehandeha mora kokoa ny dia an'izay dia fantatrao ny alehan'ny mpamily, misy mpamily mijanona manodidina ny faritra rehetra noho ny antony tsy misy ilàna azy, miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana no hahafahanao mahita ny fihetsik'izy ireo mandritra ny fanaraha-maso ny asany izay mety hanimba ny asany. .
Communication: ny sehatry ny serasera angamba no sehatra izay mila ny fakantsary vatana indrindra, ny fampahalalana dia tena zava-dehibe na dia teo foana aza izy io ankehitriny nefa lasa zava-dehibe kokoa. Ao amin'ny indostrian'ny serasera izay ifandrifarantsika ny olona hampita vaovao dia zava-dehibe ny fanaraha-maso azy manokana indrindra amin'ny fanatsarana ny fampandehanana. Ny fananana ireo fakantsary amin'izy ireo dia manampy amin'ny fahafantarana izay ataony, dia azo atao ny manamarina ny fomba fiheviny hamahana ny olana momba ny serasera rehefa misy antso. Izany koa dia manamora ny mahita izay ataon'ireo injeniera amin'ny tranokala-indrindra indrindra rehefa manandrana famindrana fitaovana iray. Raha omena amin'ny toerana lavitra iray ny torolàlana amin'ny fanampiana fakan-tsary amin'ny vatana, dia ho hita eo raha arahina an'io taratasy io ny fampahalalana na tsy niraharaha. Miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ary manao ezaka miaraka dia azon'ny manampahaizana manokana tsy eny an-tsaha raha mitarika injeniera iray hamahana ny olana ara-pifandraisana. Ny maha maika haingana hamaha ny olana iray dia tena tsara satria ny haingana haingana ny olana iray dia raisina ho afa-po kokoa ny rafitra sy ny fahatokisana. Tsara kosa ny manamarika fa ny fakantsary fiakanjoanan-tarehy indraindray mety tsy hazavaina tsara, indraindray dia mila fakantsary mihoatra ny iray mba hanatontosana fanadihadiana iray momba ny lohahevitra iray.
Serivisy, entona ary serivisy fahadiovana: manana fakan-tsary mitazona vatana eo am-panompoana posy elektronika na angamba misy tamba-jotra afaka manararaotra indrindra, noho izany dia azo atao tsara izay ataon'ity tekinika ity amin'ny fotoana tena izy ary hanitsy azy ihany koa rehefa manao fahadisoana izy. Tena ilaina tokoa ny afaka mifandray amin'ny mpiasa rehefa miasa ny fanaraha-maso ny asany izy ireo ary mahazo fanavaozana amin'ny fivoaran'izy ireo. Ao amin'ny indostrian'ny entona, amin'ny teboka fitrandrahana manana fakantsary vatana dia afaka manampy hanara-maso raha manao fampiharana ny etika azo antoka ny mpiasa ary tsy manandrana misy heloka bevava. Amin'ny toeram-pivarotana any amin'ny faritra sasany, ny mpivarotra mivarotra varotra entona dia azo atao ny mampiasa fakantsary vatana mba hanampiana amin'ny fahafantarana ny vidin'izy ireo sy ny raha ny varotra amina lahatsary dia mifanentana amin'ny tatitra momba ny varotra. Ny serivisy fahadiovana dia misy ifandraisany amin'ny fanadiovana sy ny mpiasa amin'ny fahadiovana izay manatanteraka ireo asa ireo, miaraka amin'ny fakantsary body body dia lasa mora mahita hoe manao ahoana ny asa ataon'ilay mpiasa sy ny ezaka be atao amin'ny fanadiovana sy hanadiovana ny fiarahamonina. Amin'ny alàlan'ny fakan-tsary dia azon'ny mpiasa atao mamaritra mazava hoe iza no miasa tsara mba hifanaraka amin'ny takian'izy ireo ary izay tsy mahazatra ny endriny.
Varotra varotra: ao amin'ny indostrian'ny varotra manontolo izay matetika no be ny boaty sy ny carting mpamatsy amin'ny toerana samihafa izay angatahana azy, tena zava-dehibe tokoa fa misy maso akaiky ny mpiasa satria mety ho lasa tsy hita ny sarety raha tsy dia kely loatra ny vola alainy amin'ny hetsika izay mandeha. Ny fampiharana ny fandaharana amin'ny fakan-tsary mihetsika ho an'ny vatana dia azo jerena ho fepetra ilaina amin'ny lalana mahitsy satria nanjary mety hahitana izay fandanian'ny mpiasa ny fotoany. Ny fananana ny fakantsary vatana dia mampihena ny fihenan-keloka ary mamorona fahatsiarovan-tena izay mitazona azy ireo amin'ny rantsan-tongotra. Karazana toe-tsaina itiavan'ny mpiasa tsirairay izany, miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny asan-dry zareo dia tsy ho mora ny hangalatra na hanao heloka bevava mihitsy aza any am-piasana. Ny antoka koa dia manana anjara anjara amin'ny rafitra lehibe satria mety ho fakan-tsary miaraka izy ireo, nasaina hanamarina izay rehetra mivoaka sy ivelan'ny indostria. Raha mangataka fanadiovana sy mijery ihany koa ny entana atolotry ireo fiara, dia manana anjara toerana lehibe izy ireo mikasika ny fangalarana ny halatra. Zava-dehibe ireo izay eo amin'ny foibe fanaraha-maso sy fahazoana fidirana izay ahitana ireo horonan-tsary sy haino aman-jery izay hita na toy ny firaketana na amin'ny tena fotoana, dia olona mahatsiaro tena ary afaka mahatakatra ny toe-javatra rehetra rehefa mitsara.
Varotra varotra: sahala amin'ny varotra varotra bizina, ny varotra antsinjarany dia mila fanaraha-maso sy fiheverana betsaka. Ny fananana CCTV dia mety tsy ampy fitaratra ampy ilaina hanadiovana ny zava-misy, amin'ny fananana ireo fakantsary vatana dia manome ny fahafaha-manao ny asan'ny mpivarotra anao. Ny fananana ny fakan-tsary irery dia mampitombo ny ambaratonga fahatsiarovan-tena, noho izany dia manaova ny fepetra mifanaraka amin'ny fikambanana sy ny fitsipika ny mpiasa. Mihena ny mpiasa ka tsy afaka mangalatra, ny fakantsary vatana ihany koa dia manampy amin'ny fanamafisana fa ny isan'ireo mpanjifa ao anaty horonantsary amin'ny talen'ny varotra. Rehefa misy ny vola very na tsy voavidy ho an'ny vokatra, ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra hanombohan'ny fanadihadiana dia ny firaketana cam. Miaraka amin'ny hajia eo amin'ny sary, azo atao ny mamantatra ny daty namidy ny vokatra manokana ary hahitana izay tena mitranga. Amin'ny tranga fatiantoka, miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana, dia haseho eo amin'ny efijery rehefa misy olona mandroba ny fitantanana ny volany. Miaraka amin'ny porofo toy izany, dia azo atao ny manala harona ary misambotra olona toa izany. Amin'ny porofom-pahalalanao, dia mety hanahirana ny vahaolana.
Fitantanam-bola sy fiantohana ary trano fonenana: eo amin'ny sehatry ny banky sy ny ara-bola izay be dia be ny fidiram-bola sy ny fihoaram-bola be, dia tian'ny olona hazoto hitazona ny sasany. Diso izany ary tena manameloka, ny fanisana na fitantanana vola no manome anao zon'ny azy ireo. Ny fananana fakan-tsary mihetsika amin'ny vatana amin'ny tranga toa itony dia manaporofo fa tena mahomby satria tsy hisy olona handratra vola rehefa hita ny asany. Ny indostrian'ny fiantohana dia mifantoka amin'ny fiantohana ny fananana, ny entana ary ny fiainana. Ny fakantsary vatana dia afaka ampiasain'ny mpandraharaha rehefa mandeha an-tsokosoko ary azo averina jerena hanao fanombanana. Ireo horonantsary avy amin'ny horonan-tsary dia azo ampiasaina ho fizarana fanandramana izay azo ampiasaina amin'ny fampianarana any aoriana. Mety hanao fahadisoana izy ireo amin'ny paikady fiantohana na fomba fiasa, kanefa zava-dehibe no ianaran'izy ireo avy amin'ireo hadisoana ireo ary mihatsara kokoa. Ny fitantanana trano sy fananana no tena mifandraika amin'ny famarotana ny tany sy ny fananana, azo ampiasaina koa ny maka sary na sary ny fananana manokana izay azo alefa amin'ilay masoivoho hanaovana tombana. Ny fitantanana trano tena izy dia mihatsara kokoa amin'ny fakan-tsary vita amin'ny vatana na dia manao asa marina sy matotra aza ianao dia mila fakantsary tena matanjaka hahafahany mamita ny asa marina. Koa satria ny sary misy famaritana avo lenta dia ampiasaina sy takiana amin'ny fitantanana ny trano dia manan-danja tokoa ny fakantsary karazan-tariby karazana mahery vaika.
Ankehitriny izao dia nohazavaina vetivety ireo sehatra rehetra ireo ary fantatray ny maha-zava-dehibe ny fakan-tsary misy kapa. Ny fahombiazan'izy ireo sy ny fomba mahomby azony anaovan'izy ireo ny orinasantsika dia tokony ho anton-javatra lehibe ho dinihina. Amin'izany rehetra izany dia zava-dehibe ny fahafantarantsika ny olana mahazatra indrindra amin'ny fakan-tsary tsy tokony hialàna. Ny olana momba ny tsiambaratelo dia olana lehibe amin'ny fakan-tsary amin'ny ankapobeny, raha mampiasa ny fakantsary vatana ianao dia tena zava-dehibe tokoa ny hanaovanao ireo lalàna momba ny fanjakana momba azy ireo. Tena zava-dehibe ihany koa fa rehefa mirakitra olona dia tsy maintsy ho tonga saina ny zava-mitranga. Diso ny fanoratana fotsiny ny olona tsy misy ny fahalalana. Rehefa mirakitra firaketana ary manontany ny olompirenena iray fa ajanona ianao dia tena zava-dehibe ny ataonao na mety ho miatrika fiampangana maromaro. Rehefa misafidy ny hampiasa fakantsary fitafiam-batana ny mpampiasa dia zava-dehibe ny ampahafantarina ny mpiasa, tsy maintsy manaiky izy ireo ary hanao sonia avy eo dia tsy maintsy nofana momba ny fomba fampiasana azy toy ny matihanina izy ireo.
Ny mpitsikera dia nanondro olana isan-karazany izay misy fiantraikany sarotra amin'ny zon'ny fiainana manokan'ny olom-pirenena, fahazoana rakitsoratra tsy miankina ary firaketana ireo olona marefo eo amin'ny ankizy. Olana ireo izay notondroin'ny mpitsikera ho olana izay nipoitra avy amin'ny fampiasana fakantsary raisina eo amin'ny fiaraha-monina. Vokatr'izany dia manome fiofanana hentitra ny masoivoho mpampihatra ny lalàna ary manana fitsipika sy politika momba ny fampiasana ireo fakantsary mba tsy hisian'ny olana mandritra ny fiezahana hamaha ny iray. Ho an'ny mpampiasa tsy miankina izay mety te hampiasa an'io fitaovana io dia zava-dehibe ho azy ireo ny mahafantatra fa ny lalàna momba ny tsiambaratelo dia tsy maintsy ifanarahana tanteraka.
Vokatry ny fakan-tsary mifono vatana
Fahatsiarovan-tena: izany dia mila fahatsapan-tena fa efa nojerena ianao, izany no fantatra koa amin'ny maha-zava-dehibe ny fananana ny tanjona. Mitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny ankapobeny rehefa mahita ny olona fa mijery azy ireo. Miseho ny fanovana ny fitondran-tena ary misy ny fifanarahana amin'ny fihetsika azo ekena ara-tsosialy, amin'izany dia voaporofo fa izay rehetra mahatonga ny fifantohana iray amin'ny tena dia mampitombo ny fahatsiarovan-tena. Ny fakantsary fitaovam-batana dia iray amin'ireo fomba maro hampitombo ny fahatsiarovan-tena sivily ary mampahafantatra azy ireo fa ny fihetsika nataony dia jerena sy raisina. Fomba iray ahafahan'izy ireo misakana ny tsy hanao ratsy sy hanohintohina ny lalàna. Ny fahatsiarovan-tena no fototry ny zava-dehibe aroso, rehefa fantatry ny olona iray fa voarakitra izy ireo dia manao zavatra tsara izy ireo ary mifamadika amin'ny fitondran-tenany tsara indrindra.
Torohevitra momba ny fampiasana teknolojia
Ny torohevitra ho an'ny teknolojia momba ny fampiasana dia:
Ny horonan-tsary dia tsy maintsy manana taham-bolan'ny 25 farafahakeliny isaky ny segondra (fps)
Ny bateria fakan-tsary ampiasaina dia tsy maintsy mihazakazaka mandritra ny ora 3 farafahakeliny
Ny famoahana sary dia tsy tokony ho kely indrindra amin'ny 480p ie. 640 X 480
Ny rafitry ny fakantsary dia tsy maintsy manana garanty herintaona farafahakeliny isaky ny orinasa ividianana azy
Ny fitahirizan'ny fakantsary dia tsy maintsy afaka maka sary kely farafahakeliny 3 ora rehefa apetraka amin'ny toerana farafaharatsiny
Ny fakan-tsary dia tokony hanana jiro maivana manokana haingam-pandeha ahafahan'ny firaketana mora foana na dia tsy misy jiro aza
Tombontsoa amin'ny fakantsary ara-batana avy amin'ny indostria no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin
3825 Total Views 4 Views Today